Collage freeware Picasa 3 - Samee Picture collage ah ee Free
> Resource > Free > Photo collage freeware Review - Picasa 3
Picasa waa Raaxada iyo functional software maamulka sawir iyo tafatirka lacag la'aan ah oo kuu ogolaanaya in aad collage ka ​​marto sameeyo. Inkasta oo aan la filayaa urur fiican iyo awoodaha baadhi karo oo awood badan, Picasa waa fiican bilowga ah iyo sawir digital hiwaayadda kuwaas oo doonaya in uu abaabulo sawirrada ah oo dhan ee drive adag, kala sooco albums, ka dhigi collages sawir, kor loogu qaado sawiro, iyo wadaagaan online saaxiibada iyo qoyska.
Picasa 3 sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad ka dhigi collages sawir iyo sawiro post in web album internetka si toos ah uga Picasa in kombiyuutarada Windows ama iPhoto in Macs. Picasa 3 waa mid ka mid ah kii sameeyey sawir collage ugu wanaagsan ee suuqa, gaar ahaan waa freeware.
Faa'iidada iyo faa'iido darrada Picasa collage freeware
• Miyuu hawlaha aasaasiga ah ee lacag la'aanta ah
• Waxa uu bixiyaa saarista red-indhaha, saamaynta degdeg ah, iyo fursadaha kala duwan online qaybsiga.
• Muuji sawirada sida screensaver ah caadadii, collage, ama filim slide show.
• Waxaa loo sameeyay dadka isticmaala bilaabayso iyo sawir digital hiwaayadda.
• Foomamka collage sawir aan sidaa u badan.
• kama dhigi karaa buugga sawirka, kaarka salaan iyo jadwalka.
• nidaamka gal ku salaysan A ee ururka waa mid adag.
• tag Limited iyo muuqaalada raadinaya.
Sida loo isticmaalo Picasa in Samee Photo collage
Ka dib marka aad ku rakibtay Picasa, ee markii ugu horeysay socda, waxa ay ka baadhi doona oo sort oo dhan sawirada aad ka fayl aad cayimay galay albums. Marka xiga marka ay jiraan sawiro cusub oo ku daray in ay fayl kuwa, ay si toos ah laga keeno doonaa in Picasa. Tani waa feature aad u faa'iido badan in uu abaabulo tiro badan oo sawiro digital. Hadda, aad heshay sawiro uga arrimo collage free samaynta collage ah. Hoos ka eeg oo ku saabsan sida loo sameeyo collage sawir isticmaalaya Picasa 3.
Talaabada 1:. Gala album ah ama abuuraan album & dejinta photos
Talaabada 2: Dooro sawiro by click-jiita ama isticmaal wareeg-click.
Tallaabada 3: Tag " abuuraan / sawir collage "iyo template collage xusho.
Tallaabada 4: samaysaa saldhigyo iyo in la abuuro collage in file image u gebi ahaanba bilaash ah.
e Collage Kan sameeyey Free Picasa Hagaajinta Faa'iido leh
• qalab A qoraalka oo kuu oggolaanaysa in si toos ah aad ka daabacan qoraalka on sawirada.
• fursadaha in ay muujiyaan qoraalka ee daabacayaa iyo bandhigyada slide.
• saxo Automatic indhaha oo cas, oo ka shaqeeya si fiican.
• A qalab retouching cusub ee tirtiro baxay xagashada iyo ceebaalowyo
• A siladda sawir ku dhisneyd
• .Wadashaqayntaas Online
• noocyada collage New
• talooyin Dalagyada iyo in ka badan